अजबको चीनमा गजबको अनुभव - China Radio International
(GMT+08:00) 2014-08-05 14:31:22
मैले सबैभन्दा पहिले चीनको नाम सुनेको हिरो कलमबाट हो। 2040 सालतिर म प्राथमिक तहमा अध्ययनरत रहँदा मेरा दाजुले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरिसक्नु भएको थियो। उहाँसँग एउटा चाइनिज कलम थियो निलो रङको। त्यो कलम त्यतिखेर महङ्गो मानिन्थ्यो, सायद पाँच रुपैयाँ पर्थ्यो होला। हामीलाई हम्मेसी छुन पनि दिनु हुन्थेन। त्यो कलमको भिर्नेपट्टिको कभरमा हिरो लेखेको थियो। त्यतिखेर त्यस्ता कलम बोक्ने एकाध व्यक्ति थिए। त्यसकारण पनि चाइनिज हिरो कलम भिर्नु र त्यसले लेख्नुलाई गौरव मानिन्थ्यो। अझ कलम बोक्ने व्यक्तिले आफूलाई पनि 'हिरो' नै ठान्थ्यो। दाजु हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो - 'यो चानचुने फुल्टिन हो त। हिरो हो केटा हो हिरो! यो चाइनिज हो। चाइनिज भनेको चीनमा बनेको बाबु हो। सितिमिति हो त। चीनमा बनेको कलम बोक्ने भाग्य त खप्परमा लिएर आएको हुनुपर्छ।'
दाजुले पनि त्यो कलम दशैँमा मामाघरबाट आएको दक्षिणा र तिहारमा दैसीभैलो खेलेको चाराना आठाना जोहो गरेर किन्नु भएको रहेछ। म दाजु घरमा नभएको समयमा त्यो कलम सरक्क झिकेर आफ्ना कापीमा केही लेख्ने प्रयास गर्थेँ। तर कलम समाइसक्दा मेरो हात काम्ने गर्दथ्यो। कारण हिरो कलम समाउनलाई मजस्ता जिरोको के हैसियत भन्ने लाग्थ्यो क्यारे।
इलामको पूर्वी भेगमा पर्ने नयाँबजार गाउँ पन्चायत (हालको गाबिस)मा रहेको एकमात्र माध्यमिक विद्यालय अमरकल्याण मावि भरखरै प्रस्तावितबाट स्वीकृत मावि बनेको थियो। हामी पढ्ने त्यो स्कुलको नजिकै बजार थियो। त्यो बजारको नाम नयाँबजार अनि गाउँ पन्चायतको नाम पनि नयाँबजार नै। नयाँबजारमा हरेक मङ्गलबार हाटबजार लाग्दथ्यो। अरुबेला बजार सुनसान हुन्थ्यो। बिहाटमा चिया पनि खान नपाइने बजारमा मङ्गलबारको हाटमा भने पाइला टेक्ने ठाउँ हुँदैन थियो। नयाँबजारमै एउटा हुलाक थियो अतिरिक्त हुलाक। त्यो हुलाक पनि मङ्गलबार मात्र खुल्थ्यो। नामसालिङबाट सार्की दाइहरुले झोलामा चिठीपत्र लिएर आउँथे। हुलाकमा जिम्मा लगाउँथे र बजारमा रहेको छिरिङ सरको घर अगाडि बसेर जुत्ता सिलाउने र मादलमा खरी लगाउने काम गर्दथे। हुलाकमा मानन्द भण्डारी र बजारकै पासाङ दाइ पनि कर्मचारी थिए। तर उनीहरु पनि मङ्गलबार मात्र कार्यालय खोल्थे। हाम्रो स्कुल पनि मङ्गलबार चाहिँ बार्‍ह बजे नै बिदा हुन्थ्यो। हामीलाई बिदा गरेर सरहरु बजारमा ठेक्का उठाउन जानुहुन्थ्यो स्कुलको अतिरिक्त आयश्रोताका लागि।
त्यतिखेर हामी प्रत्येक मङ्गलबार हुलाकमा जान्थ्यौँ र स्कुलमा पढ्ने आफूभन्दा सिनियर दाइदिदीहरुका चिठीपत्र बुझेर ल्याउने गर्दथ्यौँ। कारण उनीहरुका प्राय प्रेमचिठी अर्थात् 'लभलेटर'हरु आएका हुन्थे। अनि हामीलाई उनीहरुका लभलेटर खुसुक्क खोलेर पढ्ने र फेरि टाँसेर जस्ताको जस्तै बनाएर दिन खुब मजा आउँथ्यो। हामीले सम्बन्धित मान्छेकहाँ चिठी पुर्‍याइदिएपछि हुलाकी दाइहरुलाई पनि आनन्दले जागिर खान भइहाल्यो। त्यस्तो काम गर्नेमा नारायण चँदारा, नरनाथ भण्डारी र म अलिक खप्पिस थियौँ।
2042 सालको असार महिनाको एउटा मङ्गलबार म हुलाकमा गएँ। त्यतिबेला म कक्षा6मा अध्ययनरत थिएँ। अरु बेला त हामी केटाहरु हुल बाँधेर हुलाकमा जान्थ्यौँ। तर खै के संयोग पर्‍यो कुन्नि त्यो दिन म एक्लै हुलाकमा गएको रहेछु। हुलाकमा मैले मानन्द भण्डारीलाई सोधेँ 'काका हाम्रा स्कुलका कसैको चिठीपत्र आएको छ कि?' उहाँले मलाई आएको छ भन्दै एउटा सेतो ठूलो खामको चिठी दिनुभयो। चिठीको बाहिर नाम हेरेँ ज्ञानु भट्टराई लेखेको रहेछ। उनी हामीभन्दा एक कक्षा माथि अर्थात् कक्षा सातमा पढ्ने दिदी थिइन्। चिठी हातमा लिएर म छक्क परेँ। त्यति ठूलो खाममा यत्रो लभलेटर। वा… आज त मजाले पढिने भइयो भन्दै म चिठी बोकेर बुकीफूल फुलेका डाँडाँतिर गएँ। त्यतिबेला लभलेटर लेख्नेले पाउने केटी छ भने पठाउने केटा भए पनि खाममा पठाउनेको नाम चाहिँ केटीकै लेख्ने गर्दथ्ये। अनि यदि केटीले केटालाई लेखेको रहेछ भने पठाउनेको नाम पनि केटाकै राखिएको हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा कसैले शङ्का नगरुन् भन्ने थियो। हामी त्यस्ता कुरामा अर्काका पत्र पढ्दापढ्दै पोख्त भइसकेका थियौँ। तर ज्ञानु भट्टराईलाई पत्र पठाउने मान्छे केटा हो कि केटी हो मैले खाममा मात्र हेरेर थाहा पाइँन।
पत्र खोल्दा निकै होसियार भएर खोल्नु पर्दथ्यो। पछि फेरि टाँसेर जस्ताको तस्तै बनाउनका लागि खाम च्यातिनु हुँदैन थियो। मैले पनि निकै होसियार भएर त्यो टल्किने ठूलो खाम (अहिलेको ए फोर साइजको) खोलेँ। हँ चिठी त हातले लेखेको नभएर छापा पो रहेछ। पत्रमा कतै पनि प्रेमका कुरा थिइनन्। पत्रमा व्यक्तिगत कुरा पनि थिएनन्। अनि एक पृष्ठको चिठीसँगै झण्डै दसबार्‍हवटा अरु फर्महरु थिए जसमा नाम, ठेगाना, उमेर, शिक्षा, रुचि लगायतका सूचनाहरु लेख्ने ठाउँ थियो। मैले तीनपटक पढेपछि मात्र थाहा पाएँ त्यो चिठी त लभलेटर नभएर तत्कालीन रेडियो बेइजिङले पठाएको पत्र रहेछ।
मैले ज्ञानुको चिठीबाट दुईवटा फर्महरु सुटुक्क झिकेँ र बाँकीलाई खाममा राखेर सुनाखरीको डाँठ घोटेर उक्काएको खामलाई टाँसिदिएँ। भोलिपल्ट मैले त्यो चिठी ज्ञानुलाई दिएँ। अनि मैले झिकेको फर्म भरेर आठाना (पचास पैसा) को टिकट टाँसेर निर्दिष्ट ठेगानामा पठाएँ। मैले पत्र पठाएको दुई महिनापछिको मङ्गलबार मैले रेडियो बेइजिङबाट प्रत्युत्तर पाएँ। मैले जीवनमै पाएको पहिलो पत्र थियो त्यो। खामभित्र रेडियो बेइजिङको एउटा ब्याच, केही पोष्टकार्ड र मलाई सम्बोधन गरेर लेखिको पत्र थियो। म फुरुङ्ग परेँ। त्यसपछि लगातार तीनचारपटक पत्रहरु आदानप्रदान हुन थालेपछि मैले थाहा पाएँ मेरो दाजु होमनाथ आचार्य, अनि त्यही स्कुल पढेर क्याम्सप पुग्नुभएका शिखरनाथ सापकोटा र दिवाकर भण्डारी पनि रेडियो बेइजिङलाई पत्राचार गर्नुहुँदोरहेछ। शिखरनाथ सापकोटाले ज्ञानु भट्टराईलाई पत्र लेख्न लगाउनु भएको रहेछ।
म रेडियो बेइजिङको पत्र पाउनासाथ प्रत्युत्तर पठाउँथेँ। पहिले चीनमा पत्र पठाउनका लागि पचास पैसामै हुन्थ्यो। तर पछि चीनमा पत्राचार गर्नका लागि एक रुपैयाँ र केही वर्षपछि दुई रुपैयाँ बनाइयो। मलाई एउटा चिठी पठाउनका लागि दुई रुपैयाँको टिकट किन्न महाभारत नै हुन्थ्यो। तर पनि कहिले घरबाट पैसा चोरेर त कहिले लास जलाउन लाँदा बाटामा भुटेको धानसँगै छरिएका पैसा बटुलेर पनि मैले पत्र भने लेखिरहेँ। मलाई अङ्ग्रेजी भाषाका पत्रिका पनि रेडियो बेइजिङले पठाउन थाल्यो तर म सरकारी स्कुलमा पढ्ने त्यसमाथि अङ्ग्रेजी भाषामा सबैभन्दा लद्दु केटाका लागि ती पत्रिका पढ्न सम्भव भएन। मैले पत्रमा नेपाली पत्रिका मगाएँ। रेडियोले नेपाली पत्रिका नभएको उल्लेख गर्दै हिन्दी भाषामा प्रकाशित चीन सचित्र पत्रिका पठाउन थाल्यो। त�� चीन सचित्र पत्रिका पढ्न भन्दा पनि किताबमा गाता हाल्नका लागि काइदाका थिए। हामी चीन सचित्र पत्रिकाका पाना निकालेर किताबमा मिलाएर गाता लगाउँथ्यौँ।
रेडियो बेइजिङमा पत्राचार गर्न थालेको छ महिनापछि मैले रेडियोमा चिनियाँले बोलेको नेपाली आवाज सुन्न थालेँ। त्यसपछि त रेडियो बेइजिङ सुन्नु र त्यसमा पत्राचार गर्नु मेरा लागि एक किसिमको नसा भयो।
मेरो हेण्डराइटिङ माध्यमिक स्कुल पढ्दा सारै नराम्रो थियो। अहिले पनि उस्तै छ भने पनि हुन्छ। हिजोआज कम्प्युटरमा टाइप गर्ने भएकाले म लाजमर्नु हुनबाट जोगिएको छु। हामी त्यतिबेला साना साना कापी चलाउँथ्यौँ। तर मैले रेडियोमा चिठी लेख्दा लामो लामो लेख्ने गरेकाले धेरै पेज लेख्नुपर्दथ्यो। ठूला पेज भएको कापीमा हामी परीक्षामा मात्र लेख्न पाउँथ्यो। कक्षा आठको परीक्षा दिँदै गर्दा मैले थप कापी मागेँ। त्यो कापी मैले परीक्षामा लेख्न नभएर रेडियो बेइजिङमा पत्र लेख्नका लागि मागेको थिएँ। मागिसक्दा मैले त्यसलाई लुकाएँ। समय सकिन लाग्दा कापी मागे पनि सरले दिनुभयो। तर म कस्तो भुद्दु अलिक अगाडि नै मागेको भए त हुने थियो नि। कापी मागिसक्दा समय पनि सकियो र मैले मागेको कापी लुकाएर लेखेको मात्र सरलाई बुझाएँ। हामीलाई कक्षा आठमा शिक्षा पढाउने विष्णु भट्टराई सरले भरखरै मागेको कापी कहाँ राखिस् भनेर सोध्नुभयो। म चोर पक्राउ परिहालेँ। मैले सत्य कुरा बोलेँ – रेडियो बेइजिङमा पत्र लेख्नका लागि लगेको। तर सरले त्यो पेज पनि खोस्नुभयो।
हिरो कलमबाट चीनसँग परिचित म रेडियोमा झुण्डिन थालेँ। रेडियो सुन्दै र पत्राचार गर्दागर्दै 2047 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि म आइएस्सी पढ्नका लागि काठमाडौँको ठमेलस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसमा भर्ना भएँ। अनि त्यहीँको ठेगाना उल्लेख गरेर रेडियो बेइजिङमा पत्राचार गर्न थालेँ। रेडियोले आयोजना गरेका हरेक प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने र प्राय प्रथम पुरस्कार पाउँदै आएँ। रेडियो बेइजिङकै प्रभावले मैले 2052 सालदेखि पत्रकारिता गर्न थालेँ। कलम र रेडियोले मलाई चीन चिनाएका थिए अनि त्यही प्रभावले पत्रकार बन्न पनि सकेँ। सन् 2004 मा उत्कृष्ट श्रोता भएर मैले चीनको पहिलो भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि सन् 2006 मा नेपाली पत्रकारहरुको एउटा प्रतिनिधमण्डलमा समावेश भएर चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको भ्रमण गरेँ भने सन् 2008 मा नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश भएर चीनको तेस्रो भ्रमण गरेँ। अनि सन् 2013 को जुनमा चीनको युन्नान प्रान्तको खुन्मिङमा आयोजित चीन दक्षिण एसिया मेलामा पनि एउटा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुने मौका पाएँ।
पाँचौँ पटक सन् 2013 को अगष्टमा म चीन आएँ। यस अगाडिका चारवटा चीन भ्रमणभन्दा यो पृथक थियो। किनभने यसअगाडि म चीनमा पाहुना बनेर पाँचतारे होटेलमा बस्दै मोजमस्तीमा घुम्ने र बैठकमा सहभागी हुने काम मात्र गरेको थिएँ। तर यसपटक म 28 वर्ष अगाडि मैले पत्राचार सुरु गरेको तत्कालीन रेडियो बेइजिङ (सन् 1993 देखि चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो)मा विदेशी विशेषज्ञको रुपमा एउटा जागिरे भएर चीनमा आएको थिएँ। अगाडिका चीन भ्रमणमा मैले चीनलाई एउटा रहस्य र अभेद्य राष्ट्रका रुपमा लिएको थिएँ। अहिले एक वर्षको बसाइ र कार्य अनुभवले मलाई चीन एउटा अजबको देश हो र यहाँ गजबको अनुभव बटुलिँदैछ भन्ने लागेको छ।
चिनियाँहरु हातले अथवा चम्माले नखाएर चपस्टिक्सले खान्छन्। अथवा ठेट नेपालीमा भन्ने हो भने सिन्काले च्यापेर खान्छन्। यो चिनियाँहरुको संस्कृति हो। मेरा लागि पहिलो अनौठो अनुभव चपस्टिक्सले खाना खानु रह्यो। खाना खाने समय तालिका पनि चीनमा अचम्मको हुन्छ। बेलुकाको खाना सामान्यतः पाँच बजे खाने गर्छन्। गर्मी मौसममा घाम सामान्यतः साँझ साढे सात बजेतिर अस्ताउँछ। डिनर खाँदा चाहिँ दिउँसै हुन्छ। यसो हुनुको पछाडि चिनियाँहरु खाना खाने बित्तिकै सुत्दैनन्। खाना खाएपछि कम्तिमा पनि तीनघण्टा पछि मात्र सुत्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले साँझको खाना खाएपछि कोही फेरि अफिस जाने त कोही बजार जाने काम गर्छन्। चिनियाँ खानामा मासुको परिकार अनिवार्यजस्तै छ। कहिलेकाहीँ त लाग्छ चीनमा कुनै पनि व्यक्ति साकाहारी छैनन्। चिनियाँले नखाने मासु संसारमा कतै पाइँदैन पनि। किनभने लगभग सबै प्रकारका मासु चीनमा खाइन्छ। खानाका परिकारका लागि चीन विश्वमै पहिलो स्थानमा आउँछ। चिनियाँ संस्कृति बनेको खानेकुराको परिकारहरु पनि यहाँ हजारौँ छन्। पाकेको भुइँकटहरको तरकारी पनि यहीँ खाइन्छ भने हरियो दुधे मकैको तरकारी पनि यहीँ पाइन्छ। पानीकमलको गानाको तरकारी पनि यहीँ हुन्छ भने बाँसका पातमा चामल पोको पारेर बनाइने विशेष खानेकुरा पनि यहीँको संस्कृति हो।
त्यसपछि चिनियाँ भाषाको उच्चारण पद्धति मेरा लागि सबैभन्दा आश्चर्यजनक र अनौठो अनुभव रह्यो। चिनियाँहरु आफ्नै देशलाई चीन अथवा अंग्रेजीमा भनिने चाइना भन्दैनन् र चाइना भनेको बुझ्दैनन् पनि। किनभने उनीहरुले आफ्नो देशलाई चुङको भन्छन्। चिनियाँ भाषामा 'चुङ' भनेको मध्य हो भने 'को' भनेको भूभाग अथवा देश हो। त्यसकारण चिनियाँ भाषामा चीनलाई विश्वको मध्यभागमा पर्ने देश भनेर पुकारिन्छ। चिनियाँ भाषामा अरु देशको नाम पनि फरक फरक छ। उदाहरणका लागि अमेरिकालाई मैको, बेलायतलाई यिङको, फ्रान्सलाई फाको, जर्मनीलाई तको, भारतलाई इन्तु, नेपाललाई निपोर, रुसलाई आलौस भनिन्छ।
चिनियाँ भाषामा अंग्रेजी 'बी' अक्षरको उच्चार प हुन्छ। 'जी' अक्षरको उच्चार क हुन्छ, 'टी' को थ हुन्छ, 'डी' को उच्चारण त, 'जे' को च, 'पी' को फ हुन्छ। अरुहरु बेइजिङ भन्छन् चिनियाँहरु पैचिङ भन्छन्। यसो हुनुको कारण बी अक्षरलाई प उच्चारण हुनु र जेलाई च उच्चारण भएकाले हो। बेइजिङको नजिकै ग्रेटवाल हेर्ने ठाउँको नामलाई अंग्रेजीमा Badaling लेखिन्छ। तर यसको उच्चारण पातालिङ हुन्छ। यदि कुनै अंग्रेजी जान्ने चिनियाँलाई बादालिङ कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने बताउन सक्दैन। तर पातालिङ कहाँ पर्छ भन्यो भने उसले सजिलै बताउँछ। चीनका अरु ठाउँको नाम उच्चारण गर्दा पनि हामी छक्क पर्छौँ। हामी ग्वाङ्झाउ भन्छौँ चिनियाँहरु क्वाङ चौ भन्छन्। हामी कुन्मिङ भन्छौँ चिनियाँहरु खुन्मिङ भन्छन्।
चीनका वर्तमान राष्ट्राध्यक्षको नाम Xi Jin Ping हो। यसलाई अरुले भन्दा सी जिन पिङ भन्छन् तर चिनियाँ उच्चारण अनुसार चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको नाम सी चिन फिङ हो। सन् 2005 मा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआईको एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा गएको थियो। त्यो प्रतिनिधिमण्डलको नेता Bai De Jun थिए। मल्ल होटलमा भएको स्वागत कार्यक्रममा उद्घोषकले उहाँलाई बाई दे जुन भनेर बोलायो। यसरी बोलाउँदा चिनियाँ दूताबासका एकजना अधिकारीले उहाँको नाम गलत उच्चारण भएको भनेर आपत्ति नै गर्नु पर्‍यो किनभने उहाँको नामलाई चिनियाँ उच्चारणमा पाई ते चुन हुन्थ्यो। नेपालका लागि वर्तमान चिनियाँ राजदूत ऊ छुन्थाई हुन्। उनको नाम त्यति गार्‍हो छैन। यसभन्दा पहिले याङ हौलान थिए। उनको पनि नाम सजिलै थियो। तर यङ हौलानभन्दा पहिलेका राजदूत नेपालमा तीनवर्ष बस्दा पनि कुनै नेपालीले उनको नाम उच्चारण गर्न जानेनन्। Qiu Guohong नामका ती राजदूतको नामको चिनियाँ उच्चारण छिउ कोहोङ हुन्थ्यो। तर सबै नेपाली सञ्चारमाध्यमले क्यु गुओहोङ भनेर प्रकाशन/प्रसारण गरिरहे। उनी नेपालका लागि सन् 2008 देखि 2011 सम्म चिनियाँ राजदूत थिए।
चीनको समय र मौसम गैर चिनियाँलाई अचम्ममा पार्ने अर्को अनुभव रहेको छ। राजधानी बेइजिङमा यतिबेला (जुलाई अगष्ट सबैभन्दा गर्मी हुने समय) अधिकतम् तापक्रम 39 डिग्री सेल्सियस् रहन्छ। तातो हावा वहने भएकाले निकै गर्मी हुन्छ। नेपालको नेपालगन्ज जत्तिकै गर्मी हुने स्थानका रुपमा बेइजिङ रहेको छ। अनि जाडो मौसममा बेइजिङमा न्युनतम् तापक्रम माइनस् 15 डिग्री सेल्सियस् पुग्छ। हिउँ पर्छ र तीन हप्तासम्म हिउँ पग्लदैन। गर्मी मौसममा बेइजिङ घुम्न आउने पर्यटकलाई बेइजिङमा सँधै गर्मी हुन्छ भन्ने छाप पर्छ भने जाडो मौसममा बेइजिङ आउनेहरुका लागि यो त फ्रिजिङप्लेस रहेछ भन्ने धारणा रहन्छ। यहीँ बसिरहनेका लागि चाहिँ धन्न हिटिङ सिस्टम र कुलिङ सिस्टमले समस्या पारेको छैन।
प्रविधिको प्रयोगमा चिनियाँहरु धेरै अगाडि छन्। नयाँनयाँ मोबाइल फोन फेर्ने र नयाँ मोडल किन्ने कुरामा चिनियाँहरु मनग्गे पैसा खर्च गर्छन्। खाना खाँदा अथवा अत्यन्त भीड भएको भूमिगत रेल चढ्दा पनि चिनयाँ युवापुस्ता एक हातले मोबाइलमा गेम खेल्ने र वीच्याट (चिनियाँहरु वोइसिन भन्छन्) मा च्याट गर्न छोड्दैनन्। भीडमा थिचिएर असिनपसिन हुँदा पनि मोबाइलमा गेम खेलेको र च्याट गरेको देख्दा लाग्छ चीन गजबकै छ।
बाल्यकालमा हिरो कलमबाट थाहा पाएको चीन र रेडियो सुनेर घनिष्ट बनेको चीनसँग त्यही कलम र रेडियोको काम यहाँ बसेर गर्नु परेको छ। यति बिशाल चीनमा बस्न थालेको एक वर्ष भयो। तर अँहँ कुनै भेउ पाउन सकेको छैन। यो अजङ्गको चीनमा म भुसुना भइरहेको छु।
साभारः सेतोपाटी 2014 जुलाई 31 तारिख बिहीबार （2071 साउन 15 गते）